Ihe ohuru ewere maka Coronavirus na Isi | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIhe ohuru eji eme maka oria ojoo na isi obodo
18 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Ejiri ihe ohuru maka coronavirus n'isi obodo
Obodo Ankara dị njikere ịbanye na ngalaba ya niile na - alụso ọrịa ọgụ ọgụ. Site na nkuzi nke onye isi obodo ukwu Mansur Yavas, ewepụtara mkpebi ịdọ aka na ntị ọhụrụ. Iri ego mgbazinye ego sitere na azụmaahịa ndị nke Metropolitanị yigharịrị ọnwa abụọ. Ọ bụ ezie na a na-etinye Şefkat Evleri na mmemme mmechi ahụ kwa ụbọchị, a na-eburu ụlọ ahịa March nke aterslọ Ihe nkiri Isi na laterbọchị ọzọ. Iji gbochie igwe mmadụ ime na igbochi mgbasa nke nje, a ga-eme olili ozu nke ụmụ amaala na-eche n'echeghị oge ekpere. Ìhè ọgwugwu nke Obodo; Ọ na-aga n'ihu na-eme ihe omume ya na ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ọrụ ahụ ike, ụlọ nzukọ na-anụ ihe, ụlọ ọrụ na-abụghị nke gọọmentị, ụlọ ọrụ ọha, ebe a na-elekọta ndị agadi, ebe a na-elekọta ndị agadi, ụlọ egwuregwu, obere egwuregwu na tagzi.
Obodo ukwu nọ na nche anọwo na mpaghara niile n'ihi ntiwapụ nke Coronavirus.
Kọmịshọna Ahụike, nke guzobere n'okpuru ntuzi onye isi Secretary General Mustafa Kemal Çokakoğlu na iwu nke Onye Isi Obodo Mịnịsta Mansur Yavaş, na-esochi ọmụmụ ọcha na ịgba ọgwụ mgbochi 7/24. Obodo ukwu, nke lekwasịrị anya na ọrụ ịdị ọcha, na-ewepụta usoro ọhụụ n'otu n'otu.
NIILE nke mgbazinye SITE N’IME YAVAŞ SI EGO
Obodo ukwu, nke na-adọ ụmụ amaala aka na ntị site na nyocha nke obodo, ọkọlọtọ na bọọdụ mkpọsa, tinyere akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na-aga n'ihu na-eme atụmatụ ọhụrụ n'ọgụ megide ọrịa ntiwapụ.
Onye isi obodo Ankara, Mansur Yavaş kwupụtara site na nkwupụta ya site na akụkọ mgbasa ozi ọhaneze na a na-eyigharị ịnata ego mgbazinye nke azụmaahịa nke ndị Metropolitan na ọnwa abụọ. Site na mkpebi ahụ, e nyere ụlọ ọrụ azụmaahịa nke ndị Obodo ukwu na ndị ụlọ ọrụ na ndị mmekọ, ndị nwere nsogbu ịkwụ ụgwọ.
EKPATARA EGO NA AKW NEWKWỌ EZI
Nnukwu Obodo, nke na-abawanye usoro ịdị ọcha maka ahụike ọha; gụnyere Complọ Ọmịiko 5 na Etlik, Ruzgar, Varlik, Ulus na Oncology, ebe ndị ọrịa na ndị ikwu ha nọrọ, na mmemme mmebi ụbọchị ha.
Ọ bụ ezie na a na-eyigharị ụgwọ ụlọ ọrụ maka isi ụgbọ mmiri na ụbọchị ọzọ, a na-eme ihe ọhụrụ iji gbochie igwe mmadụ ibido na ịgbasa nje ahụ. Ka a na-ekpochapụ ụgbọala ndị olili ozu ahụ, a ga-eli ozu ndị mmadụ n'echeghị oge ekpere, n'ikwekọ na ụmụ amaala nwere olili ozu.
AKW CONKWỌ NA NWAANY ST ANYER ANYA NA-AN 7 24/XNUMX
Ngalaba na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na nchịkwa BELPLAS A.Ş. Ka ndị otu ha na-arụ ọrụ ehihie na abalị n'ofe obodo ahụ, ha na-arụkwa ọrụ mmerụ ahụ n'ụgbọ njem ọha na eze, obere obere ụgbọ ala na ndị njem tagzi kwa ụbọchị.
Site na mkpebi nke Ministry of National Education, mgbe ọzụzụ ahụ gachara n’agbata afọ 16-30 nke ọnwa Maachị, ndị njem na-agbadata na Mọnk, ANKARAY, Teleferik na EGO, ebe EGO General Directorate na-aga n’ihu na-eme kwa ụbọchị karị kwa ụtụtụ na oge ọrụ bọs na elekere.
Faruk Kalender, onye otu Mgbakọ nke General Assembly nke Chamber of Craftsmen na Automobiles nke Ankara Umum kwuru, “Anyị na-ekele ndị obodo anyị na ndị nyere aka na ahụike nke ndị anyị na ndị ọkwọ ụgbọ ala”. Daalụ maka ọrụ a. Obi dị anyị ụtọ maka omume a, nke anyị mere site n'ịtụle ma ahụike anyị yana ahụike ndị ahịa. ”
Ikele Onye Isi Obodo Mịnịsta Mansur Yavaş maka ọrụ ịgba ọrụ ndị a na-arụ na bọs ndị ụgbọ ala, tumadi na Güvenpark, Bentderesi na Sincan, Sincan Chauffeurs na Onye isi oche Automobile Federation Isa Yalçın kwuru:
“N'ihi ọrịa a na-efe efe n'ụwa, anyị nọ n'ihe ize ndụ na mba anyị ma anyị jikọtara ya na nke a. Ka Chukwu nwee obi uto na onye isi obodo anyị. Ugbo ala anyi aghachapuchaala. Ndị a dị ezigbo mkpa n'ihe gbasara ahụike, anyị ga-emerụkwa ụgbọala anyị. ”
Ka ọrụ ọrụ idebe ọcha nke ndị otu ndị uwe ojii na - ahụ maka ndị uwe ojii na - elekọta obodo na - aga n'ihu; Achọghị ntụrụndụ nke ebe ngosi nka, ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ụlọ ịnụ ihe, ụlọ nke ndị na-abụghị gọọmentị, ụlọ ọrụ ọha, ụlọ ndị nọọsụ, ebe nlekọta ndị agadi na klọb egwuregwu. Ndi otu Ngalaba na-aru oru obodo na aru oru nlere anya nlebara anya nke oma n’ebe ebe omenala na akuko, karie n’okporo uzo, n'okporo uzo na boulevards, n’ebe ndi ozo na ebe ezumike.
Nnupụ isi na isi obodo